आइतबार नोभेम्बर 14, 2021 |
आइतबार नोभेम्बर 14, 2021
विषय — नश्वर र अमर
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: उत्पत्ति 1 : 26
““तब परमेश्वरले भन्नुभयो, अब हामी मानिस सृष्टि गरौं। हामी मानिस हाम्रै स्वरुप बनाउनेछौं र मानिस हामी जस्तै हुनेछन्। तिनीहरुले जलचर, नभचर, स्थलचरमा ठूला साना अनि घस्रने सबै प्राणीहरुमाथि शासन गर्नैछन्।””
उत्तरदायी पढाइ: यूहन्ना6: 25-29, 35
25 मानिसहरूले येशूलाई समुद्र पट्टि देखे। तिनीहरूले उहाँलाइ सोधे, रब्बि, तपाईं यहाँ कहिले आई पुग्नु भयो?
26 उहाँले उत्तर दिनु भयो, तिमीहरूले मलाई किन खोजिरहेछौ? के मेरो चमत्कारहरू जसले मेरो शक्तिको प्रमाण दिन्छ देखे पछि मलाई खोजिरहेकाछौ? अहँ! म सत्य भन्छु, तिमीहरूले मलाई खोजेको कारण के हो भने तिमीहरूले रोटी खोयौ र पुरा अघायौ।
27 जुन खाद्य नष्ट हुन्छ त्यसको निम्ति काम नगर तर जुन खाद्य नष्ट हुँदैन अनि अनन्त जीवन दिन्छ त्यसको निम्ति काम गर। मानिसको पुत्रले तिमीहरूलाई त्यस्तो खाद्य दिनु हुन्छ। पिताले देखाएका छन् कि उनी मानिसका पुत्र संग छन्।
28 मानिसहरूले येशूलाई सोधे, परमेश्वरले हामीबाट कस्तो प्रकारको काम चाहनु हुन्छ।
29 येशूले उत्तर दिनुभयो, परमेश्वरले तिमीहरूबाट कस्तो काम चाहनुहुन्छ भने तिमीहरू उहाँले पठाउनु भएको एकमाथि विश्वास गर्नु पर्छ।
35 तब येशूले भन्नुभयो, म त्यो रोटी हुँ जसले जीवन दिंदछ। जुन मानिस मेरोमा आउँदछ ऊ कहिल्यै भोको हुँदैन। जुन मानिसले ममाथि विश्वास गर्दछ ऊ कहिल्यै तिर्खाउँदैन।
1. भजनसंग्रह 100 : 1-5
1 हेसारा पृथ्वीको मानिसहरू हो, परमप्रभुको जयजयकार गर।
2 परमप्रभुको सेवामा खुशी हौ! खुशीका गीतहरू लिएर परमप्रभुको सम्मुख आऊ!
3 परमप्रभु नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने जान। उहाँले हामीलाई रच्नु भयो अनि हामी उहाँका मानिसहरू हौं, हामी उहाँका भेंडा हौं।
4 उहाँको शहरमा धन्यवादको गीत लिएर आऊ। उहाँको मन्दिरमा प्रशंसाको गीतहरू लिएर आऊ। उहाँको प्रशंसा गर र उहाँको नाउँलाई धन्यवाद चढाओ।
5 परमप्रभु, भलो हुनुहुन्छ। उहाँको प्रेम अनन्त छ। हामी सदा सर्वदा उहाँमाथि भरोसा राख्न सक्छौं!
2. मर्कूस6: 34 (र येशू) मात्र
34 र येशू...
3. मर्कूस7: 24 (गए)-37
24 … टायरको जिल्लातिर जानुभयो, उहाँ त्यहीं नै भएको कुरा मानिसहरूले थाहा नपाओस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। त्यहाँ उहाँको उपस्थितिलाई गुप्त राख्न सम्भव थिएन।
27 येशूले त्यस आइमाईलाई भन्नुभयो, केटा केटीहरूले खाने रोटी लिएर कुकुरहरूतिर फ्याँक्नु उचित होईन, पहिले केटा केटीहरूले जे जति खान्छन् खाऊन्।
28 आइमाईले भनी, प्रभु, त्यो साँचो हो। तर टेबल मुनिका कुकुरहरूले पनि केटा-केटीले छोडेका खानेकुराहरू खान्छन्।
29 तब येशूले त्यस आइमाईलाई भन्नुभयो, यो खूबै राम्रो जवाफ हो। यसर्थ तिमी जानसक्छौ। तिम्रो छोरीलाई भूतात्माले छोडिसकेको छ।
34 येशूले आकाशमा हेर्नुभयो, अनि उहाँले लामो सास लिनु भयो। उहाँले त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, इफ्फाता
37 मानिसहरू साँचै चकित भए। तिनीहरूले भने, येशूले जे पनि गर्नु भेएको छ। येशूले बैह्रोलाई पनि सुन्नसक्ने अनि लाटोलाईपनि बोल्न सक्ने बनाउनु हुनछ।
4. प्रेरित 20 : 7-12
5. रोमी 8 : 12-25
6. 1 यूहन्ना3: 1-3
1 हामीलाई पिताले यति विघ्न प्रेम गर्नु भएको छ कि हामी परमेश्वरको बालकहरु भनिनु योग्यका छौं। अनि वास्तवमा हामी परमेश्वरका बालकहरु हौं। तर संसारका मानिसहरु यो बुइदैनन् कि हामीहरु परमेश्वरका बालकहरु हौं, किनभने तिनीहरुले उहाँलाई चिनेका छैनन्।
महान आध्यात्मिक तथ्यलाई बाहिर ल्याउनु पर्छ कि मानिस पूर्ण र अमर छ, हुनेछैन।
प्रत्येकले निर्णय गर्ने बिन्दु यो हो कि यो नश्वर मन हो वा अमर मन जो कारक हो। हामीले मेटाफिजिकल विज्ञान र यसको ईश्वरीय सिद्धान्तको लागि पदार्थको आधारलाई त्याग्नुपर्छ।
3. 312 : 14-22
मानिसहरू आफ्नो हृदयमा प्रेमको झिल्का भए तापनि भौतिक यहोवाको भावनामा परमानन्दमा जान्छन्। तैपनि ईश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, र प्रेम बिना, ईश्वर, अमरत्व प्रकट हुन सक्दैन। नश्वरहरूले सत्यलाई नबुझेर विश्वास गर्न खोज्छन्; यद्यपि परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। मृत्यु अपरिहार्य छ भनी मर्त्यहरू दावी गर्छन्; तर मानिसको अनन्त सिद्धान्त सदा-वर्तमान जीवन हो। मर्त्यहरू एक सीमित व्यक्तिगत ईश्वरमा विश्वास गर्छन्; जबकि परमेश्वर असीम प्रेम हुनुहुन्छ, जुन असीमित हुनुपर्छ।
4. 475 : 5-27 अर्को पाना
प्रश्न। - मान्छे के हो?
जवाफ। - मानिस कुनै कुरा होइन; ऊ मस्तिष्क, रगत, हड्डी र अन्य भौतिक तत्वहरूले बनेको छैन। धर्मशास्त्रले हामीलाई जानकारी दिन्छ कि मानिस परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाइएको हो। कुरा त्यो समानता होइन। आत्माको समानता आत्माको विपरीत हुन सक्दैन। मानिस आध्यात्मिक र सिद्ध छ; र किनभने उहाँ आध्यात्मिक र सिद्ध हुनुहुन्छ, उहाँलाई क्रिश्चियन विज्ञानमा यति बुझ्नुपर्छ। मानिस एक विचार हो, छवि, प्रेमको; ऊ शारीरिक छैन। उहाँ परमेश्वरको मिश्रित विचार हुनुहुन्छ, सबै सही विचारहरू सहित; परमेश्वरको छवि र समानतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने सबैका लागि सामान्य शब्द; विज्ञानमा पाइने रूपमा अस्तित्वको सचेत पहिचान, जसमा मानिस ईश्वर वा दिमागको प्रतिबिम्ब हो, र त्यसैले अनन्त छ; जसको ईश्वरबाट अलग मन छैन; जसमा देवताबाट एक गुण पनि कम छैन; जुनसँग आफ्नो जीवन, बुद्धि, वा सृजनात्मक शक्ति छैन, तर आत्मिक रूपमा उहाँको सृष्टिकर्तासँग सम्बन्धित सबै कुरा प्रतिबिम्बित गर्दछ।
अनि परमेश्वरले भन्नुभयो: "हाम्रो प्रतिरूपमा मानिसलाई हाम्रो स्वरूपमा बनाऔं, र तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, हावाका चराहरू, गाईवस्तुहरू र सम्पूर्ण पृथ्वी र सबैमाथि प्रभुत्व पाओस्। पृथ्वीमा घस्रने कुरा।
मानिस पाप, रोग र मृत्युको लागि असक्षम छ। वास्तविक मानिस पवित्रताबाट टाढा जान सक्दैन, न त परमेश्वर, जसद्वारा मानिस विकसित भएको छ, पाप गर्न क्षमता वा स्वतन्त्रता उत्पन्न गर्न सक्छ। मरणशील पापी परमेश्वरको मानिस होइन। नश्वरहरू अमरहरूको नकली हुन्। तिनीहरू दुष्टका सन्तान हुन्, वा एक दुष्ट, जसले घोषणा गर्छ कि मानिस धुलोमा वा भौतिक भ्रूणको रूपमा सुरु हुन्छ। दिव्य विज्ञानमा, ईश्वर र वास्तविक मानिस ईश्वरीय सिद्धान्त र विचारको रूपमा अविभाज्य छन्।
त्रुटि, यसको अन्तिम सीमाहरूमा आग्रह गरिएको, आत्म-नाश हुन्छ। त्रुटिले आत्मा शरीरमा छ, जीवन र बुद्धि पदार्थमा छ, र यो कुरा मानिस हो भन्ने दाबी गर्न बन्द हुनेछ। भगवान मानिसको सिद्धान्त हो, र मानिस भगवान को विचार हो। त्यसैले मानिस नश्वर हो न भौतिक । मर्त्यहरू गायब हुनेछन्, र अमरहरू, वा परमेश्वरका सन्तानहरू, मानिसको एकमात्र र अनन्त सत्यको रूपमा देखा पर्नेछ। मर्त्यहरू भगवानका पतित बच्चाहरू होइनन्। तिनीहरूको अस्तित्वको पूर्ण अवस्था कहिल्यै थिएन, जुन पछि पुन: प्राप्त गर्न सकिन्छ। तिनीहरू नश्वर इतिहासको सुरुदेखि नै "पापमा गर्भधारण र अधर्ममा जन्मिएका" थिए। मृत्यु अन्ततः अमरतामा निलिएको छ। अमर मानिससँग सम्बन्धित तथ्यहरूलाई स्थान दिन पाप, रोग र मृत्यु हराउनु पर्छ।
हे नश्वर, यो जान्नुहोस् र मानिसको आध्यात्मिक स्थितिको खोजी गर्नुहोस्, जुन सबै भौतिक स्वार्थभन्दा बाहिर छ। याद गर्नुहोस् कि धर्मशास्त्रले मरणशील मानिसको बारेमा यसो भन्छ: "मानिसको लागि, उसको दिन घाँस जस्तै हो: मैदानको फूल जस्तै, त्यो फल्छ। थप छैन।"
5. 428 : 23-29
हामीले सदाको लागि अस्तित्वको चेतनालाई धारण गर्नुपर्छ, र ढिलो होस् वा चाँडो, ख्रीष्ट र क्रिश्चियन विज्ञान मार्फत, हामीले पाप र मृत्युलाई मास्टर गर्नै पर्छ। मानिसको अमरताको प्रमाण अझ स्पष्ट हुनेछ, किनकि भौतिक विश्वासहरू त्यागेका छन् र अस्तित्वको अमर तथ्यहरू स्वीकार गरिन्छ।